အိမ္တြင္းေရး ဆူပူမႈ မရွိပဲ သာယာ ေအးခ်မ္းေစခ်င္ရင္. - PwintSan Media
အိမ္တြင္းေရး ဆူပူမႈ မရွိပဲ သာယာ ေအးခ်မ္းေစခ်င္ရင္.
ငါအလုပ်များတယ် အိမ်မှာလည်းနေရတာနည်းတယ်ဆိုပြီး သောက်တော်ရေ မကပ်နိုင်ဘူးလို့လည်း မပြောလိုက်ပါနဲ့..ဘယ်နေရာမှာမဆိုမိမိရေသောက်တိုင်း ပါးစပ်ထဲမထည့်ခင် ကိုယ်သောက်မယ့်ခွက်ကို လက်နဲ့ကိုင်ထားပြီး
“မြတ်စွာဘုရားအား သောက်တော်ရေ လှူဒါန်းပါတယ်”လို့ စိတ်က အာရုံပြုပြီး ကပ်လို့ရပါတယ်……
ရှေးကဆရာတော်ကြီးများဆိုရင် ဆွမ်းခံကြွပြန်လာပြီးရင် သပိတ်အတိုင်းဘုရားရှင်ကို ဆပ်ကပ်ပြီးမှ သပိတ်ကိုစွန့်ပြီး ဘုဉ်းပေးလေ့ရှိပါတယ်တဲ့..ဆွမ်းတော်စွန့်တာစားရင် ဉာဏ်ထိုင်းတယ်ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့ ကျမ်းဂန်များထဲမှာ မိန့်တော်မမူခဲ့ပါဘူး.
.လို့ ဆရာတော်များ၏တရားများ စာအုပ်များမှာနာဖူး ဖတ်ဖူးပါတယ်..